စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ 100% £ 100 အထိတက်ပွဲ + 20 အော်စကာ spins | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ 100% £ 100 အထိတက်ပွဲ + 20 အော်စကာ spins | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ 100% £ 100 အထိတက်ပွဲ + 20 အော်စကာ spins
2.This bonus will be active 00:01 24ကြိမ်မြောက် – 23:59 26th February 2017 (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
4.To be eligible for 20 Spins anda100% up to £100 Bonus, ကစားသမား£ 10 နိမ့်ဆုံးငွေသွင်းရပါမည်.
7.ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီ၏အမြင့်ဆုံးခံရလိမ့်မည် 20 spins on Pyramid: Quest for Immortality only
8.အခမဲ့ဗိုင်းငင်ပြီးဆုကြေးငွေအထိကြာနိုင်ပါတယ်3သင့်အကောင့်မှအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့မြှင့်တင်ရေးရဲ့အဆုံးကနေအလုပ်လုပ်ရက်ပတ်လုံး.
10.အလှည့်ခြင်းများကနေရရှိခဲ့ပါတယ်အားလုံးအနိုင်ရရှိဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေအတွက်ဆုခနှင့် 30x ၏အာမခံလိုအပ်ချက်ရရှိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းဆုကြေးငွေပမာဏကိုသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်.
11.သာကဤဂိမ်းအပေါ် wagering: Starburst, Gonzo ရှာပုံတော်, အမွှာလည်, Spinata Grande, ထုချွန်းပုံ, piggy စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်, South Park, ဂျက် Hammer, ချိတ်သူရဲကောင်းများ, ငါ့ကို dazzle, နီယွန် Stax, Dracula, ဂျက်နှင့် The Beanstalk, အောင်မြင်သော, ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Rush, အလင်းအိမ်, ဒစ္စကိုလှည့်ဖျား, Koi မင်းသမီး, ဒဏ္ဍာရီလာအိမ်ထောင်မကျခင်, Sparks, စတစ်ကာများ, မှော် Portal, Blackjack Classic, အသီးဆိုင်, ပန်းပွင့်, မျှော်စင် Steam, Fisticuffs, ကံကောင်း Angler, လေဆင်နှာမောင်းခြံနဲ့ Escape, Subtopia, ဂျက် Hammer 2, ဘစ်ဘန်း, invisible က Man, South Park2ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Chaos, slot ဘုရင်, ဂြိုလ်သား, တောက်ခြင်း, Guns N Roses, နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏မဟာ, မောင်း, Aloha, လူးစ Hendrix, ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား, Nrvna, ဝက် Fly သောအခါ,, Motorhead, Atlantis ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ, ခရစ္စမတ်၏လျှို့ဝှက်ချက်များအအာမခံလိုအပ်ချက်များ၏လျှော့ချရေးဆီသို့ဦးတည်ရေတွက်ပါလိမ့်မယ်
12.အောက်ပါပိုက်ဆံအိတ်အအာမခံလိုအပ်ချက်ဆီသို့ဦးတည်နှင့်ဤနိုင်ရန်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်: ရီးရဲလ်ငွေစာရင်း, အပိုဆုပြီးတော့ FreeSpin ဆုကြေးငွေ.
13.ဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေကနေအများဆုံးကူးပြောင်းငွေပမာဏ 4X မှာချီးမြှင့်ဆုကြေးငွေပမာဏကိုမိနစ်မှာပါလိမ့်မည်. အာမခံပြီးပြည့်စုံသည်တစ်ချိန်ကအပိုဆုရန်ပုံငွေများကိုအလိုအလျှောက်ပြောင်း.
14.ထိုအာမခံမီကရန်ပုံငွေဆုတ်ခွာပြီးပြည့်စုံသည်အကောင့်အားလုံးကိုဆုကြေးငွေနှင့်ဤ attribute ရဲ့ဆိုအနိုင်ရရှိကိုပယ်လိမ့်မည်.
15.ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့ဆုကြေးငွေအလှည့်တရားဝင်ဆက်လက်တည်ရှိအသိအမှတ်ပြု7နေ့ရကျ. သငျသညျဤကာလအတွက်အာမခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်မထားသင့်, ဒီမြှင့်တင်ရေးမှကျန်ရှိသောဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေများကိုသင့်အကောင့်မှဖယ်ရှားပစ်မည်.
16.ကစားသမားတစ်ဦးတည်းသာဆုကြေးငွေတစုံတယောက်သောသူသည်အချိန်မှာတက်ကြွဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပေးနေကြပါတယ်, သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး “ငါ့အကောင့်” သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုဆုကြေးငွေတန်းစီကြည့်ရှုရန်အပိုင်း